Xasan Sheekh: Bananbaxyada socda waan ka qeybgaleynaa | KEYDMEDIA ONLINE
Xasan Sheekh: Bananbaxyada socda waan ka qeybgaleynaa
"Dadka maanta waxyeellada soo gaartay waxaa mas'uuliyaddeeda leh Madaxweyne Farmaajo", ayuu yiri Madaxweynihii hore ee dalka.
Midowga Musharraxiinta ayaa Shir jaraa'id oo ay qabteen waxay kaga hadleen wixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, ayagoo cambareeyay dowladda Farmaajo.
Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo u hadlay musharraxiinta ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay wixii maanta dacay, isaga oo sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay mas'uuliyaddooda qaadayo Madaxweyne Farmaajo.
"Dadka maanta waxyeellada soo gaartay waxaa mas'uuliyaddeeda leh Madaxweyne Farmaajo, maanta kaliya ma ahan ee sidan ayeey ku wadeen" ayuu yiri Xasan Sheekh.
Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa ku tageeray shacabka iney u istaagaan sidii ay ku miijin lahaayeen dareenkooda, "Waxaan dhiiragelineynaa in dadka Soomaaliyeed ay ra'yigooda cabiraan si nabad ah, waana waajib uu dastuurka siiyay" ayuu yirri Xasan Sheekh.
Siyaasiyiinta ku mideysan madasha musharraxiinta ayuu sheegay Xasan Sheekh in maalmaha soo aaddan ay ka qeybgali doonaan dibadbaxyada nabadeed.
"Hadaan nahay siyaasiyiinta waan ka qeybgaleynaa dibadbaxyada nabadeed ee dreenka doorasho lagu muujinayo waqtigooda, ciidamada waxaan leenahay sharciga ilaaliya, laguguma amri karo dadka xabadey ama dil, ogowna maalin un bay eeddaas kugu imaanee"
Xasan Sheekh wuxuu dowladda Farmaajo ku eedeeyay in xalay Sagaal saac habeennimo ay ciidanka ay soo xir-xireen ganacsato, sidoo kalena ay albaabka u gargaraaceen siyaasiyiin si ay usoo xiraan balse la waayey.
Siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan mareysa meeshii ugu xasaasisaneyd ebed 30-kii sano ee lasoo dhaafay.